अस्पतालहरु आफैले अक्सिजन प्लान्ट राख्न थालेपछि विरामीलाई राहत (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
अस्पतालहरु आफैले अक्सिजन प्लान्ट राख्न थालेपछि विरामीलाई राहत (भिडियो)
१. अस्पतालहरु आफैले अक्सिजन प्लान्ट राख्न थालेपछि विरामीलाई राहत, अस्पताललाई पनि फाइदा
नेपाल आयात गरिने वस्तुहरु मध्ये अक्सिजन पनि प्रमुख हो । र , यसैमा ठूलो धनराशी नेपालबाट बाहिरिदै आएको छ । त्यसमाथि अस्पतालहरुका लागि अति आवश्यक अक्सिजनको खपतमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था छ । तर अब नेपालमा पनि अस्पतालहरु आफैले अक्सिजन प्लान्टहरु राख्न थालेपछि अस्पताल र विरामी दुबैलाई फाइदा पुग्न थालेको छ भने यस्ले बाहिरिने ठूलो रकमलाई पनि रोकेको छ ।
अस्पताल आफैले उत्पादन गरेको अक्सिजन सस्तो पनि हुन पुग्दा विरामीको परिवारमाथि आइपर्ने आर्थिक बोझ कम हुँदै गर्दा अस्पतालले आफ्नो खर्चको ठूलो हिस्सा कटौती गर्न सफल भएको छ ।
२. झापा र इलामको चुरे क्षेत्रमा गरिएको केरा खेती देशभरका चुरे क्षेत्रका लागि अनुकरणीय
खेर गएको र नचिनेको नजानेको अवस्थामा नेपालमा धेरै जमिनहरु बाँझो नै छ । आफ्नो खेतबारी , खलिहान र जमिन बाँझो राखेर आत्मनिर्भरताको पूmर्ति देखाउने हामी पसिना बगाएको भन्दा पसिना बगाएर कमाएको रकम खर्चनमा नै रमाउने गर्छौ । तर अब चेत फुर्न थालेको हो कि मेहनत गर्ने जाँगर चल्न थालेको हो , केही सकारात्मक पाटोहरु देखिन थालेका छन् । चुरे क्षेत्र नेपालको अथाह श्रोत भएको क्षेत्र मात्र नभइ तराई मधेसलाई जहिले पनि हरियाली राख्ने हैसियत भएको क्षेत्र पनि हो ।
यही चुरे क्षेत्रको विनाशले मुलुकले नसोचेको ताण्डव र अकल्पनीय समस्याहरु देखिन थाल्दा चुरे क्षेत्रको संरक्षणकै लागि बिभिन्न गतिविधि हुँदै गर्दा झापा र इलामको चुरे क्षेत्रमा भने केरा खेती सुरु गरेर उदाहरणीय कार्य गरिन थालिएको छ । चुरे क्षेत्रमा गरिएको केरा खेतीले बजार पनि राम्रो पाउने थालेपछि यो लहर पूर्वको झापा र इलाम मात्र नभई पश्चिमको कैलाली कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रसम्म नै फैलिन आवश्यक छ ।
३.संसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने प्रमाण सुनसरी हरिनगरको सडकले देखायो
देशको पैसा सहजै बगाउने ठाउँ बाटो पनि हो , जनताले तिरको कर फिजुलमा नै रित्याउने ठाउँ सडक पनि हो । वर्खा लागेपछि बाटो बनाउने , झमझम पानी पर्न थालेपछि पिच अर्थात कालोपत्रे गर्ने , असार लागेपछि बजेट रित्याउन रातोरात विकास निर्माणको काम गर्ने बानी परेको यो मुलुकमा सुधार्न नसकेको यो पक्ष अझै बेलगाम बनेर अघि बढ्ने अवस्था देखिएको छ ।
सांसद विकास कोष नामक सांसदहरुको व्यक्तिगत भण्डार अहिले झनै नमुना बनेर देखिन थालेको छ । आफ्नो गोजीका कार्यकर्ताको गोजी भर्न सांसद विकास कोषको कुन हदसम्म दुरुपयोग हुन्छ भन्ने सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा देखिएको छ । तर काम नलाग्ने गरी विग्रिएको बाटो देखाएर उपभोक्ता समित भन्छ – कतै भ्रष्टाचार छैन, वाटो हामीले राम्रो बनाएका छौ ।
४. सबै सुविधाहरु खोसिन थालेपछि चहलपहलको कुनै कमी नहुने रमणीय शहर इलाम सुनसान बन्दै
अहिले बसेको बजार होइन इलाम , उहिले नै स्थापित शहर हो । राणाकालदेखि नै शक्ति र चर्चाको केन्द्र बनेको चियाको जननी शहर इलामले धेरै कालखण्डमा ऐतिहासिक भूमिका पनि निभाएको छ मुलुकका लागि । ‘गयो इलाम खायो सिलाम हिड्ने बेलामा गुण्टा लिलाम’ भन्ने कहावत जोडिने गरेको इलामसंग अब भने सबैथोक गुम्दै गएको छ ।
इलाम सदरमुकाम कुनै समय विद्यार्थी ,कर्मचारी, पर्यटक,सर्वसाधारण र व्यवसायीको चापले खुट्टा हाल्ने अवस्था हुदैनथ्यो । तर अहिले इलाम सुनसान बन्न थालेको छ , इलामसंग जोडिएको धेरै सुख सुविधा खोसिन थालेपछि मन पराउनेहरुले पनि बाध्य भएर इलामलाई माया मार्न थालेका छन् ।